Ukunyuka kweenwele zeNdalo 2018 | UkuKhusela nokuKhusela
Indlela Yokwenza Ukwandisa Kwakho Kuphele ngohlobo olufanelekileyo nolondolozo!
Geza imiyalelo ngaphambi kokugqoka:
Kubaluleke kakhulu ukuba uhlambe izandiso zakho kuphela kwimeko phambi kokufaka. Oku kuya kuqinisekisa ukuba iinwele zincinci kwaye zidibanisa mahala.
Sincoma I-Aussie Moist okanye i-Herbal Essence Hello Hydration (zifumaneka kwiWalmart kunye nezinye iindawo zokugcina izakhiwo zelungileyo) okanye nayiphina imimiselo eyenzelwe ukunyuka kweenwele.
Thatha zonke izibophelelo ezisisitheleni sakho, unqamle ngokupheleleyo iinwele ngamanzi afudumele kude kube zonke iifom zizaliswe. Nge-conditioner kuphela, gcwalisa iinwele ke nge-combination combination, i-Denman brush, i-wig shayela okanye ukuxubha inqabana i-conditioner ngokusebenzisa iinwele uze uphucule.
Ukwenzela i Kinky Curly textures Izandiso zixhoma iinwele kwi-hanger kwaye zivumela ukuba iinwele zithe zome. LOKUZIPHATHISA INKQUBO YOKWENZA KWENKCUBA YOKWENZA KWENKQUBO YOKWENZA I-POP CURLS! Musa ukubetha inwele.
Ukwenzela i Afro Kinky textures ukubeka iinwele ezicwangcisiweyo ngethawula kwaye uvumele umoya omile, oku kuya kuthintela ukutshatyalaliswa okukhulu. Unokuxhoma kwihanger xa ukhetha. Nceda sebenzisa izinyo ezininzi ziza kudibanisa kuphela xa iinwele zimanzi kwaye i-Denman ibhulashi ukuze ichaze iingqungquthela. Musa ukuvota.
Ukwenzela i kinky ngqo Unokomoya omile okanye utyumle iinwele.
Ukwenzela i Wigs nceda ubone ividiyo elandelayo ngezansi. Uza kubona indlela yokwenza i-wig ibonakale ngayo umfanekiso.
Apha kwi-MyNaturalHairExtensions.com sikholelwa ekufumaneni i-bang buck yakho. Ukuthenga iinwele ezilungileyo kukuthatha nje ngoku! Ukunyamekelwa kweenwele ezifanelekileyo, iingcebiso zokubhala, kunye nokugcinwa kuya kuqinisekisa ukuhlala ixesha elide.
Yeka Ukukhwela Ngaphambi Kwenzeka!
Masize nje sibhekane neenyaniso, IZINTO ZONKE ZONKE ... kodwa zikhona iindlela zokunciphisa kakhulu ukuchitha. A
Qinisekisa okokuqala iingubo zakho. Oku kubaluleke kakhulu! Sinikeza isitywina se-weft ngenani elincinci le-10.
Okwesibini, Musa ukusebenzisa iibhulashi ezinjenge-bristle njengoko zivame ukukhanda kwiintlobo zeenwele kunye nokuzikhupha kwi-weft. Soloko usebenzisa i-combs okanye i-paddle brush.
Hlanza kunye Nomzimba Wakho Ububele Ngokufanelekileyo!
Ukucoca iinwele esizicebisayo I-Shampoo ye-Organic Cleaning Shampoo yaseGiovanni. Indlela engabizi ngaphantsi I-Essential Essence Hello Hydration Shampoo.
Ukumisela iinwele esizicebisayo I-Essential Essence Hello Hydration (i-#1 yethu yokukhetha) okanye nayiphina imimiselo eyenzelwe iinwele ze-wavy / curly. A
Qinisekisa ukuba konke ukuva sele sele kuphazamisekile kwaye ukutsalwa kwisalathiso ngokungathi kunika i-2 side side ponytails. Gcina intloko yakho kwelinye icala ngaphantsi kwesitya kwaye uvumele amanzi ukuba agcwalise inwele zakho, asebenze elinye icala ngelo xesha. Yongeza i-shampoo kwiintendelezo zakho kwaye udibanise izandla zakho phantsi kweenwele zakho ukusuka kwi-weft ukuya kwi-tip. Musa ukutshiza okanye ukuxuba iinwele ukuba wenze i-lather njengokuba oku kuya kudala nje iingqungquthela ezingadingekile! Qhubeka uhambisa izandla zakho ngeenwele zakho malunga nemizuzu ye-5. Hlanza ngokuvumela amanzi ukuba agijime ngeenwele zakho njengaphambili, unokuba unganwe ngezandla zakho ngeenwele zakho ukukhawulezisa inkqubo yokuhluthwa kodwa khumbula ungagcini okanye udibanise iinwele. Blot nge thayile uze uvumele izinwele kwi-AIR DRY
Sebenzisa indlela efanayo ne-conditioner yakho kwaye uhlambe
I-Shampoo: Kanye kanye emva kweeveki ze-3
Co-Geza (ukuhlamba umgada): Ngokuqhelekileyo njengoko kufuneka
Ngaphambi kokuba Uya Kulala:
YOKULA INDAWO YOKUSEBENZA KUNYE NOKUHLAWULA
Kubaluleke kakhulu ukulawula iinwele zakho ngaphambi kokulala. Hlaba izinwele zakho ngobusuku kunye nesiqhekeza selikadi / satin okanye i-silk / satin bonnet. Iibhononti ezinika i-leeway ixesha elide lisebenza kakuhle. (jonga umfanekiso ophezulu)
Ngama-wavy / curly textures sincoma ukubeka i-5-10 enkulu okanye i-braids kwizinwele zakho uze uyibeke phantsi kwekhonti.
Ukulungiswa kweempawu sincoma ukunqwenela iinwele zakho uze uzibeke phantsi kwekhwele le-silk / satin.
Ukulandela le nkqubo yebusuku kuya kwenza ukuba ulwandiso lwakho luhlale ixesha elide, jonga bhetele, kwaye uthintele ukukhwabanisa okukhokelela ekutyeni okugqithiseleyo.
Phatha izandiso zakho ngokungathi ziphi iinwele zakho zangempela zendalo!
OKUYIKHONO YOKUBALULEKILEYO: Ukuba uthanda izandiso zakho baya kukuthanda! Nazi ezinye ii-Do & Do not ​
Vumela iinwele zakho ukuba zithe zomele xa ugqiba ukutshabalalisa oomileyo usebenzise ixesha lokukhusela
xa uthabatha iinwele zakho ngeemveliso zokushisa zihlala zisetyenziselwa ukukhusela umkhuhlane. Uxinzelelo olusenyongweni lunokubangela ukutshabalalisa umonakalo kunye nokuguqula (ukukhulula) umzekelo wendalo we-curl. I-Walmart inezohlukeneyo zokukhusela ukushisa ukukhetha. Uhlobo luka-John Freida lokutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa komlindi okhuselekileyo lukhuseli luyilungele ukusetyenziswa ngenxa yokuba isisindo sokukhanya kunye neoli ikhululekile. A
Landela indlela yethu yobusuku okanye udale eyakho.
Landela i-regimen yethu yokuhlamba.
Sebenzisa i-paddle bushes kunye neentlobo ezininzi zamazinyo
Ubunzulu Ubunzima bakho iinwele
Ukuba usebenzisa nayiphi na inkonzo yombala, idayisi, iikiti zokugcoba, okanye imibala engunaphakade maziqiniseke ukuba ufuna umphenyi wobuchwephesha okanye uchwepheshe webala. Asiqinisekisi umgangatho emva kokuba kukho nayiphi na inguqu yemichiza ngoko nceda uqiniseke ukukhusela lwakho utyalo-mali.
UNGAKHULU UKUBA IZIHLOKO ZEMICIMBI YAKHO YAKHO! Izinwele zivama ukuya kumatte kwaye zixakeke xa iimveliso zentengiso zongezwa. Ukuba unezandiso zengqungquthela kwaye ufuna ukuhlawula iinwele okanye ukunciphisa i-frizz nje sebenzisa inani elincinci le-anti-frizz serum. Ukuba iimveliso zongezwa unokuzikhupha ngokuqhawula nge-Herbal Essence Isimemezelo se-Hydration ngaphandle kokumisa.
Ungaze uzame ukwenza isitayela, ukuhlamba okanye ukukhawuleza iinwele zakho xa ukhathele okanye ukhawuleza! Le iresiphi yokukhungatheka kwaye kuya kubangela ukuba ube nzima kakhulu ngeenwele zakho. A
musa ukusebenzisa iibhulashi zebristle.
Ungazami nayiphi na inguqu yeekhemikhali kwizinwele ngaphandle ngcebiso
Ukunyamekelwa kweenwele nganye
SISIKHUMBULI I-DENMAN BRUSH NAMALUNGU! Kunoko indlela eyona ndlela yokubambisa ikunamanzi kunye nezinyo ezinkulu. I-tangle tease iya kusebenza kwakhona. Ukusebenzisa ibhulashi yaseDenman kunokuba nzima kakhulu, ixesha elidlayo kwaye linokugqithisa iinwele kwi-weft. Ungazami ukundibanisa ezi zinwele xa zome. Qinisekisa ukuba i-hydrated kakhulu ngamanzi kunye ne-conditioner.
Le nwele igugu ngokugqithisekileyo kunye nokuphuma. Naluphi na umkhiqizo weprintling oyithandayo ubunwele bakho bezityalo ungasetyenziswa nale nto. Le nywele idlala umongameli nje ngeenwele zakho ze-4b 4c. Ukuphuma kwempembelelo kunye nokukhangela ukugqithisa kudlulileyo ixesha kunye nale nwele kwaye kunceda iingqungquthela zokwelula!
Jonga lo Mkhiqizo Uluhlu kule khasi.
Siyacetyiswa ukusebenzisa i-Denman brush okanye ububanzi inqamle kunye neenwele. Le nwele ifana ne-afro kinky ithanda umswakama. Kuphela ukushiya ukukhanya kwiimeko kwaye amanzi asebenza kakuhle.
Xa ukuxakeka usebenzisa i-Denman brush yenza kwakhona iipopop.
Kinky Straight, Perm Yaki, yaki eyinqaba, I-Bone echanekileyo:
Le nwele idinga ukunakekelwa kakhulu kwaye ayiyithandi imveliso eninzi. Akuyi kuziphatha kakuhle kunye nomakhi womkhiqizo.
Ukuba kunokwenzeka zama ukugubha iinwele zakho ebusuku ukuze unciphise ukukhawuleza kwaye wenze iindawo ezintle ukulala ngosuku olulandelayo.
Ndiyabulela Ukuvakasha Kwamakhanda Wenwele Engokwemvelo!
Afro Kinky Usuku wohlamba